धन, जीवन र फाइनान्सियल प्लानिङ - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
-- विशाल श्रेष्ठ / प्रकाशित मिति : बिहिबार, कार्तिक २७, २०७७
म आफ्नो परिचयको एक बिट दिएर लेखन शुरू गर्न चाहन्छु । र तपाईहरु मध्ये धेरैले जस्तै मैले पनि अध्ययनका लागि सिड्नीमा आएको हुँ । तपाईहरु मध्ये धेरै जस्तै, म पनि यहाँ एक ब्याग, एक सुटकेस र केहि हजार डलर संगै आएको हुँ । यो देशमा एकदम नयाँ अनुभव थियो । मेरा ठूला सपनाहरु थिए र म जहाँ छु त्यहाँ पुग्न धेरै राम्रा र नराम्रा अनुभवहरु पार गरेर यहाँ पुग्न म भाग्यशाली भएको छु । सब भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मैले ती अनुभवहरूबाट सिकें र प्रत्येक दिन मेरो (Comfort zone) बाट बाहिर निस्केर आफैलाई चुनौती दिएँ । खुसीको कुरा जीवनमा तपाईले नयाँ चीजहरू गरेर पाउनुहुनेछ र तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न स्थिर रहनु व्यक्तिगत विकासको लागि एकदम महत्वपूर्ण छ । म बुझ्न सक्दछु कि तपाईं मसँग सम्झौताको साथ तपाईंको टाउको हप्काउनुहुनेछ किनकि तपाईंले पनि त्यस्तै अवस्थाबाट पार गर्नुपरेको थियो र विशेष गरी जब तपाई घर छोडेर अष्ट्रेलिया जस्तो देशमा जीवनमा सफल हुनको लागि आउनुभएको छ ।
वर्तमानमा, हाम्रो नेपाली समुदायको लगभग ९० प्रतिशत पहिलो पुस्ताका नेपालीहरू हुन् । हामी सबै जना कडा परिश्रम गरिरहेका छौं त्यो कारण हामी अहिले यहाँ छौं । हामीमध्ये धेरै यस महान देशका नागरिक भएका छौं र अझ धेरै आउन बाँकी छ । अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने अब हामी प्यारा बच्चाहरूका आमा र बुबा पनि भएका छौं र यस देशको सुन्दर घरहरूमा बाँचिरहेका छौं । हामी अब बहु–सांस्कृतिक गतिशील समाजमा बाँचिरहेका छौं र विभिन्न इलाकाका मानिसहरूसँग हाम्रा छिमेकीहरू साझेदारी गर्दछौं । एंग्लोस ब्लनयिक (अष्ट्रेलियन), इटालियनहरू, ग्रीकहरू, लेबनानीहरू, भारतीयहरू, सर्बहरू, म्यासेडोनियालीहरू र अन्य धेरै समुदायहरूले यो देशलाई घर भनेका छन् । तिनीहरूको मामलामा, उनीहरूले हामीसँग पहिले भूमि लिने अवसर पाएका थिए र अहिले धेरै पुस्ताहरू छन् । चाँडै, यो हाम्रो समुदाय हुनेछ र यहाँ हाम्रो पुस्ताको पनि । तथ्यको रूपमा, यो अहिले नै भइरहेको छ ।
हामीले नेपाल छोडेदेखि हाम्रो दैनिक प्राथमिकताहरू परिवर्तन भएको छ । हाम्रो सम्पूर्ण जीवनशैली गतिशील धेरै नेपालीहरूका लागि परिवर्तन भएको छ जुन एक पटक विद्यार्थी थिए । हामीले हाम्रो अध्ययन पूरा गर्न, नयाँ कार किन्न, स्थायी रेसिडेन्सी (residency) प्राप्त गर्न, नागरिकता प्राप्त गर्न, बच्चा जन्माउने, पहिलो सम्पत्ति खरीद गर्ने, व्यवसाय सुरु गर्ने, क्यारियर निर्माण गर्ने आदि कार्यहरू गर्न कडा परिश्रम गरेका छौं । यी सबै लक्ष्यहरू हामीले राखेका छौं र हासिल गरेका छौं । हाम्रो नेपाली भविष्यको जग राखिएको छ र अझै धेरै चुनौतिहरू छन् । आज म एउटा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न चाहन्छु जुन प्रत्येक नेपाली घरले कुरा गर्नुपर्दछ त्यो हो–सम्पत्ति, योजना र फाइनान्सियल प्लानिङ (Financial planning) र हामी आफैले कसरी (financial freedom) वित्तीय स्वतन्त्रताको लागि अहिले र सेवानिवृत्ति वा रिटायरमेन्टको लागि सेटअप गर्छौं । सबैजना आफ्नो जीवन बिताउन चाहन्छन् न कि आफ्नो जीवन केवल काम र बिलहरूको लागि भुक्तानी गर्न चाहन्छन् । जुनसुकै पेशामा हामी संलग्न छौं, धेरै जसो हामी आम्दानी कमाउन र धितो लगायत बिलहरू तिर्नमा केन्द्रित छन् । दिनको यो तालिकाले धेरै मानिसलाई आफ्नो परिस्थितिमा उनीहरूलाई उपलब्ध हुने अवसरहरूको बारेमा सोच्न र विचार गर्न रोक्दछ । हामी मध्ये धेरै यस दुष्ट चक्रबाट (vicious cycle) कहिल्यै बाहिर आउँदैनौं । हो, सेवानिवृत्ति वा रिटायरमेन्ट (retirement) यति टाढा छ र हामीले विचार नगरेको एउटा क्षेत्र यो पनि हो कि हामी यस देशमा मर्दा हाम्रो सम्पत्तीलाई के हुन्छ । सम्पत्तीको विषय सम्पत्ति सिर्जनाबाट सुरू हुन्छ र एक दिन हामी मरेपछि सम्पत्ति हाम्रा बच्चाहरूलाई दिन्छौं । त्यसैले हामीले यो देशमा हाम्रो नयाँ पुस्ता सेट गर्न महत्वपूर्ण छ ।
यो मेरो अनुभव भएको छ । मैले यो हरेक दिन हेरिरहेको थिएँ । म मेरो ग्राहकहरु को पूरा वित्तिय तस्वीर हेर्नको लागि विशेषाधिकार पाएको छु । यो कडा परिश्रम गर्ने यी मेहनती सदस्यहरूले अवसरहरू गुमाइरहेका थिए । कसैले कि त केही ट्याक्स इन्सेन्टिभ र कसैले त अन्य सेन्टेर्लिन्क सुविधाहरू गुमाउँदै थिए । तिनीहरूले सजिलै गर्न सक्ने केही गतिविधिहरूमा संलग्न नगरेर तिनीहरू ले पैसाको एक ठूलो रकम गुमाउँछन् । मेरी आमाले मलाई यो महान भनाइ सिकाउनुभयो । चैरिटी घरमा शुरू हुन्छ । त्यसैले, मैले फाइनान्सियल प्लानरको रूपमा आफ्ना अनुभवहरू नेपाली समुदायसँग बाँड्न सोचें । तपाईं मेरो परिवार हुनुहुन्छ र तपाईंले वास्तविकता जान्नु आवश्यक छ ।
त्यहाँ तीन क्षेत्रहरू छन् जुन म मेरो नोलेज बाढ्न चाहन्छु जुन तपाईंलाई फाइदाजनक छ ।
१. सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्टाटेजीहरू बाट (Strategy) कसरी तपाईं अझ बढी पैसा सिर्जना गर्नुहुन्छ जुन सजिलै पहुँचयोग्य छ, अर्को शब्दमा लगानीमा । कस्ता प्रकारका लगानीहरू उपलब्ध छन् ? अर्को पक्ष हो कि तपाईको लोनलाई म्यानेज गरी चाँडो कम गर्न ।
२. कसरी तपाईले आफ्नै तरिकामा आरामदायी रिटायरमेन्ट जीवन बाच्न सक्नुहुन्छ किनभने सरकारी पेन्सनमा मात्र एकल व्यक्तिको लागि २२५०० डलर प्रति हो । रिटायरमेन्ट, कर प्रोत्साहन (tax incentives) र सरकारद्वारा अन्य सुविधाहरू सहित आफ्नो Superannuation कोष सिर्जना गर्न रिटायरमेन्ट लगानी रणनीतिहरू के हुन् ।
३. आफ्ना बच्चाहरूको लागि उनीहरूलाई आर्थिक पीडित हुन नपरोस् भनेर एक सहयोगी हात दिनको लागि केही पैसा छोड्नुहोस् । यो तपाईंको लिगेसी हो र यसलाई कसरी सरकारी संरचना र अन्य सुविधाहरूसँग राम्रोसँग संरचना गर्ने ।
यो अहिले र आजदेखि सुरू हुन्छ । हामी मध्ये धेरैले हाम्रो भविष्यको लागि योजना गरिसकेका छौं जुन राम्रो छ तर हामीले अहिले नै लिने मार्ग, र अहिलेका कार्यहरू नै भविष्यमा हामीलाई फाइद हुनेछ । हामीलाई सल्लाहको लागि हामी वरपरका मानिसहरूलाई सुन्ने बानी छ किनकि एक मानव भएको नाताले हामीसँग धेरै अनुभव पाएको वा हामी भन्दा पाको उमेरकालाई सुन्ने गर्छौ । फाइनन्सिअल प्लानरहरु धेरै दशकहरु को लागि मानिसहरुलाई सहयोग गर्न र मानिसहरुलाई आफ्नो जीवन यात्रामा धन सम्बन्धी सल्लाह प्रदान गर्न मार्गदर्शन सल्लाह दिदै आएका छन् । यो अमेरिका, बेलायत, आयरल्याण्ड र अष्ट्रेलिया जस्ता धनी देशहरूमा सम्मानजनक पेशा हो । यी पेशेवरहरूले प्राप्त गर्ने सम्मान उनीहरूको ज्ञानको कारणले मात्र होइन तर उनीहरूको पेशेवर सल्लाहको साथ मानसिक शान्ति र विश्वास दिएर मानिसहरूलाई जीवन परिवर्तन गर्ने तिनीहरूको क्षमताको कारण हो । हाम्रो अवस्थामा, हामीले सल्लाहका लागि त्यस्तै परिस्थितिहरूको सामना गरेका छौं । मेरै कुरा गर्दा म पनि कुन विश्वविद्यालयमा जानु पर्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको मलाई सम्झना छ ? म कुन माइग्रेसन एजेन्टमा जाउँ ? म कुन माइग्रेसन वकिलसँग सल्लाह लिन जाउँ ? जस्ता प्रश्नहरु मलाई अझै याद छ । हामी सबै एक चीज पछि छौं, अर्थात् हाम्रो समस्याहरू समाधान गर्न एक पेशेवर सल्लाह र हामीलाई मद्दत गर्न । त्यसैले, मैले यो सबैको लागि केहि प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि लेखेको छु – फाइनान्सियल प्लानर को हो ? एक फाइनान्सियल प्लानरले के गर्छ ? किन तपाईं एक फाइनान्सियल प्लानरको मा जानुपर्छ ? के मलाई फाइनान्सियल प्लानर चाहिन्छ ? मैले कहिले फइनान्सियल प्लानर को सल्लाह लिनु पर्छ?
यसलाई सरल बनाउनको लागि, फइनान्सियल प्लानर वा एक फाइनान्सियल सल्लाहकार एक लेखाकार, वकील वा एक वकील जस्तै पेशेवर हो जो तपाइँलाई तपाइँको फइनान्सियल मामिलाको साथ मद्दत गर्दछ र तपाइँको व्यक्तिगत लक्ष्यहरु संग जोडिएको तपाइँको वित्तीय लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दतको लागि पेशेवर सल्लाह प्रदान गर्दछ । वित्तीय योजना ASIC (Australian Secutiries and Investments Commisions) भनिने सरकारी निकायद्वारा निरिक्षण हुन्छ जसले फइनान्सियल सल्लाहकारहरूले गरेका कार्यहरूको निरिक्षण गर्दछ । ASIC अष्ट्रेलियाको कर्पोरेट, वित्तीय बजार र वित्तीय सेवा उद्योगमा परिचालक निकाय हो । यो अष्ट्रेलियाको आर्थिक प्रतिष्ठा र सुरक्षाको लागि जिम्मेवार छ । कि वित्तीय बजारहरू निष्पक्ष र पारदर्शी छन् भन्ने कुरा निरिक्षण गर्दछ । सबै फाइनान्सियल सल्लाहकार र योजनाकारहरू ASIC को सल्लाहकार रजिस्टर अन्तर्गत दर्ता छन् । तिनीहरू सबै हालका र अघिल्लो वित्तिय योजनाकर्ताहरूको रेकर्ड राख्छन् । प्रत्येक वित्तीय योजनाकार अष्ट्रेलियायी वित्तीय सेवा इजाजतपत्र अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त हुन्छ । कानून र तपाईको लागि वित्तीय योजनाकारहरु द्वारा दिएको सल्लाह “वित्तीय सल्लाह” (statement of advice) भन्ने वित्तीय योजनामा दस्तावेज हुन्छन् । यस कागजातले तपाई, तपाईको स्ट्राटेजीहरु र ती लक्ष्यहरु लाई प्राप्त गर्नको लागि सल्लाहको बारेमा सबै जानकारीको विवरण दिन्छ ।
धेरैजसो मानिसहरू लाग्छ कि वित्तीय योजनाकारहरू केवल धनी मानिसहरूका लागि आवश्यक छन् । परम्परागत रूपमा, त्यो सत्य हुन सक्छ । धनी मानिसहरूले उनीहरूको धनसम्पत्ति र करहरू सम्बन्धी सल्लाह लिए । सबै जना आफ्नो करहरू कम गर्न चाहन्छन् । यो तथ्य हो ! हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि ट्याक्समा पैसा बचत गर्नु भनेको हाम्रो पकेटमा बचत गरिएको पैसा हो । एउटा कारण किन तिनीहरू धनी छन् किनकी उनीहरूसँग राम्रा सल्लाहकारहरू छन् । सामान्य जीवनको नियम भनेको यो हो कि तपाईले चीजहरू राम्रोसँग गर्नु हुन्छ जब तपाई जीवनमा राम्रो सल्लाह प्राप्त गर्नुहुन्छ । यो क्यारियर र पैसाको साथ पनि लागू हुन्छ । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, हामी पश्चिमी अर्थव्यवस्थामा (western economy) बाँचिरहेका छौं, जहाँ सम्पत्ति धेरै आर्थिक कारकहरूको (economic factors) गतिविधिले निर्धारण गर्छ । हामी जस्ता सामान्य व्यक्तिहरू बीचको भिन्नता एउटा कुरा हो उनीहरूसँग पेशेवर सल्लाह दिने क्षमता छ ।
म धेरै भाग्यशाली छु मेरो करियरमा धेरै व्यक्तिहरूसँग भेटें जसलाई मैले सेवा गर्ने मौका दिएँ । मैले कहिलेकाँही यस्ता व्यक्तिहरू माझ पनि आउँदछु जुन मैले पछि उनीहरूको जीवनमा वित्तीय सल्लाह प्रदान गरें जो १० वर्ष पहिले आर्थिक सल्लाह लिएको भए अझ राम्रो हुन सक्थ्यो । म यो एकमात्र कारणले भन्छु मेरो ग्राहकको रिटायरमेन्ट राम्रो तरीकाले हुन सक्थ्यो । त्यसोभए, एक वित्तीय योजनाकारले हामी जस्तो सामान्य मानिसहरूलाई कसरी मद्दत गर्दछ ? सबै भन्दा पहिले, तिनीहरूले तपाइँको लक्ष्य अनुसार एक लगानी स्ट्राटेजीहरूको विकासमा तपाइँलाई मद्दत गर्न सक्छ । दोस्रो, तिनीहरूले तपाईंलाई कर योजना र लोन व्यवस्थापनमा मद्दत गर्न सक्दछन् । तेस्रो, उनीहरूले तपाईंलाई रिटायरमेन्टको योजना बनाउन सहयोग गर्न सक्दछन् । अन्तमा, यदी तपाईंको देहान्त भएमा estate planning योजनाको बारेमा सल्लाह दिन्छन् ताकि तपाइँको धन सम्पती उचित व्यवस्थापन र प्रियजनहरूले प्राप्त गर्न सकुन्
त्यसो भए, यहाँ केहि सामान्य घटनाहरू छन् जुन कोहीले फाइनान्सियल प्लानर वा फाइनान्सियल एड्भाइजर प्रयोग गर्न सक्दछन् ।
– नयाँ काम शुरू गर्दै
– एक व्यवसाय सुरू गर्दै
– परिवार शुरू गर्दै
– तपाईको होब्ब्रीको पछि लाग्दा
– तपाईको dream holiday जान्दा
– बच्चाहरूको भविष्य र शिक्षाको लागि लगानी गर्दा
– (home) आवासीय र वाणिज्यिक (commercial) सम्पत्ति किन्दा
– तपाइँको धन वृद्धि गर्दा
– तपाईको डेविट चुक्ता गर्दा
– आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षा गर्दा
– आफ्नो सम्पत्ति आफ्ना प्रियजनहरूलाई दिनुहोस् ।
– तपाईको रित्यार्मेन्ट को लागि योजना गर्दा ।
अन्तमा, तपाईसँग आर्थिक सल्लाह लिन धनी हुनुपर्दैन । कसैले एक पटक भनेका छन्, तपाईं तीन तरीकामा धन सिर्जना गर्नुहुन्छ । तपाईं या त इन्हेरितेन्स पाउनुहुन्छ, या त तपाईं यसलाई कमाउनुहुन्छ वा तपाईं यो विवाह गरेर पाउन सक्नु हुनेछ । तपाईको आफ्नो भविष्यको योजना बनाउन कुन बाटोमा जान चाहनुहुन्छ ? म एस पेशामा ४ वर्ष लगायत सेवा गर्दै अएको छु । म अष्ट्रेलियाको फाइनान्सियल प्लानिंग एसोसिएशनको सदस्य पनि हुँ । मेरो इरादा हाम्रो समुदायमा वित्तीय जागरूकता प्रदान गर्ने हो । यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने मलाई ईमेल र टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।